IMeya ithi izingane zabafana azingashiywa ngemuva – Msunduzi News
ININGIZIMU Afrika ibhekene nengwadla yokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Lapha umunwe ukhomba kwabesilisa abakuwo wonke mazinga okukhula. Ngakolunye uhlangothi ziningi izinhlelo ezicija abantu besifazane, okufana noMkhosi kaZulu, uMhlanga obanjwa minyaka yonke. Isikhalo esikhona kulokhu wukuthi ngesikhathi umkhulu umsebenzi owenziwa ezinganeni ezingamantombazane kuncane okwenziwa kubafana. Ekufakeni ihlombe ezinhlelweni eziqondene nabafana nabesilisa, IMeya yaseMsunduzi iKhansela uNjilo iqhuba uhlelo olubizwa ngeFather and Son. Kulolu hlelo kumenywa obaba kanye namadodana. Umhlangano wokuqala ubanjwe mhla zili-17 kuZibandlela kanti ubuhanjelwe phakathi kwabanye abantu nezinhlanga, bekungabefundisi bamabandla ahlukene, aMakhosi, amakhansela kanye namalungu omphakathi.
UNjilo obehamba namadodana akhe amabili kulo mhlangano uthe ukucijwa kwabafana kumele kuqale kubo abaholi emakhaya. “Umphakathi ubuka kithi ngakho kumqoka ukuthi ekuhambeni kwethu sikhombe indlela; sihole, sibe yisibonelo. Njengoba nami ngifike nabami abafana nje yingoba ngifisa ukudlulisa umlayezo othi akukhathaleki ukuthi ungubani, izingqinamba ezibhekene nezingane zethu zabafana ziyefana. Nazo izingane zami ngethemba ukuthi ngokuza lapha zizofunda ukuthi injobo ithungelwa ebandla”, kusho iMeya.
Enye yamadodana kaNjilo uPhumlani ubonge uyise ‘ngokuzomdodisa’: “Ngokwami ngibona lubaluleke kakhulu lolu hlelo ngokubheka izingqinamba umphakathi obhekene nazo. Ngokosikompilo izinhlelo ezinjengalezi zingalekelela ngoba uma ubaba engakwazi ukuthi akhulise indodana ngendlela, indodana ngeke yazi ubumqoka bempilo nokuziphatha emphakathini. Lolu hlelo luzolekelela ekutheni nalabo abasebancane kodwa asebeyizinhloko zemindeni badodiswe.”
Lo mcimbi ube nesithunzi njengoba ubuhanjelwe ngisho nangaMakhosi akhele uMsunduzi namaphethelo. Enye yaMakhosi amadala endaweni, iNkosi uZondi yesizwe sakwaMpumuza ibikhona. Khona lapho naleyo ebisanda kubekwa ngokusemthethweni ngoNcwaba esizweni samaNadi, iBambabukhosi uZamathuli Zondi naye ubekhona. Yethula inkulumo iNkosi yesizwe sakwaMpumuza ituse isenzo seMeya nethe siyisenzankakhona.
“Ukufakazela inhloso yalolu hlelo thina singamaZondi abesifazane siyabahlonipha, isibonelo ukuthi nansi iNkosi yamaNadi ingumuntu wesifazane nokukhombisa ukuthi siyabubona ukubaluleka komuntu wesifazane,” kusho uNondaba. Uqhube ngokuthi ukuba khona kwalolu hlelo lumvule amehlo njengoba naye engumholi ukuvezile ukuthi lolu hlelo akusilona uhlelo olufanelwe ukuthi luphelele eMsunduzi kepha yonke iNingizimu Afrika kumele ibe nalo, waqhuba ngokuthi lolu hlelo unesifiso sokuthi lufike nakuso iSILO ukuze seluleke ukuthi lungangena kanjani kulo lonke eleNdlovukazi uMthaniya.
UMfundisi uMvunga Khomo ukhulume ngalokho akubize ngechilo njengoba ethe eminye imikhuba yenzeka khona ezindlini zokukhonza “Sifisa ukudlulisa umlayezo othi noma ngabe uhlukumezeka endlini yesonto bika. Thina njengebandla asivumelani nemikhuba lena egilwa emabandleni nasemiphakathini yethu. Njengebandla okwethu ukuvikela labo ababuthaka”, kuphetha uKhomo. Lo msebenzi ubuzinyaziswe nayiziMeya ezivela kwezinye izindawo ezakhelene noMsunduzi. Ibikhona eyaseMkhambathini, iKhansela u-Eric Ngcongo kanye neMeya yaseMpenndle iKhansela uNdlela.
Bonke abebethamele lo mhlangano baphethe ngokuvumelana ngobumqoka bomhlangano bazibophezela ekushayeni ikhwelo ukuze isihlava sokuhlukunyezwa kwalabo abangenamandla ikakhulukazi abesifazane nezingane sinqandwe. Babuye bavumelana ekutheni isixazululo esingujuqu ekuhlukunyezweni silele ekwakhiweni kwezingane ezingabafana.
#Msunduzi Izindaba #Uncategorized
Previous post: UMsunduzi uzinikele ukuthi kuthunywe wona
Next post: Iyacabeka eyokukhulisa umnotho wendawo eMsunduzi